Dagaalo ka Dhacay Garbo,Doolo iyo Gaadhi la Doonayey in Lagu Qaado Jwxo-shiil oo la Qabtay – Rasaasa News
Waxaa saddexdii maalmood ee ugu dambayey ay dagaalo ka dhacayeen meelo dhawr ah oo ku yaal dhulka Somalida Ogadeeniya. Sababata dagaaladan keentay ayaa ahayd baa la yidhi Jwxo-shiil oo qorshaynayey sidii uu dalka uga soo bixi lahaa,Jwxo-shiil oo sidii aan todobaadkan dhexdiisa idiin sheegay in uu ka gaadlaynayo dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waxaan muddo ku dhawaad shan bilood ah war laga maqal Jwxo-shiil, sidda ay wararku sheegayeen waxaa uu eegga doonayey in uu ka soo baxo halkaasi, waxaana ka warhelay baa la yidhi ciidanka New Booliska ee hore uga tirsanaan jiray ururka ONLF. Sidda ay wararku sheegayaana way u aamuseen inta uu ka soo baxayo buundhidii uu ku jiray Jwxo-shiil.
Dhinaca kale Jwxo-shiil oo laftigiisu ah nin cimrigiisii ku dhamaystay sir, oo damacsanaa in uu ka soo baxo Ogadeeniya horena ay ugu suuro gali wayday in ka soo baxo, ayaa amar ku siiyey Jabhada beesha ee isaga waardiyeeya in ay dagaal ka ridaan meelo kala duwan si uu Booliska Cusub ugu mashquulo dagaalada, deedna uu u dhuunto.
Dhinaca kalena gaadhi LandCruiser ah oo looga soo diray Jwxo-shiil dhinaca Somaliya, oo uu wade ka ahaa wiil ay walaashiis dhashay, gaadhigaas oo ka galay dhinaca Buuhoodle ee xadka kala leh gabalka wardheer.
Sidda ay wararku sheegayaan Gaadhigan oo la doonayey in si cir-marnimo ah loogaga soo qaado Jwxo-shiil gudaha Ogadeeniya, ayaa maalintii shalay waxaa gacanta ku dhigay gaadhiga iyo wadihiiba Cidaanka Boliiska Cusub.
Wararkii ugu dambeeyey ee dagaalad ayaa sheegaya in uu dagaal xoog leh shalay galabtii ka dhacay meel u dhaw Tuulada Garbo, halkaas oo uu khasaare xoog leh oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jiraa ka dhacay. Waxaa arin aad looga naxo ah in tiro ka badan 50 oo ahaa ciidanka Jwxo-shiil in lagu dilay agaggaarka Garbo, waxaa kale oo ay wararku sheegayaan in dhaawac badan laga qabtay, kuwaasi oo sheegay in uu Jwxo-shiil joogo Sibi maalin ka horna uu joogay agagaarka Garbo.
Sidda ay wararku sheegayaan waxaa xidhan xuduuda dheer ee u dhaxeeya Ogadeeniya, Somaliya iyo waliba Kenya, waxaa kale oo jirta xayiraad badan oo lagu soo rogay dhadhaqaaqa gaadiidka ka talaabaya xadadka.
Meelaha ay dagaaladu ka dhaceen ayaa ah; Geri-Go’an, Dul Qabow, Garbo, Far-Madow iyo Gabagabo. Tirada dadka ku dhintay dagaaladan ayey maamulka degaanku ku sheegeen in ka badan 70 ruux.
Hadalkan ay sheegtay Dawlada Degaanka Somalida ayaa u muuqda mid dhab ah, sababtuna waxaa weeye waxay soo daabaceen magacyada dadka la dilay. Waxaa kale oo aan wax war haba yaraatee laga haynin dhinaca Jwxo-shiil iyo ciidankii la socday iyo waliba taageerayaalkiisa oo haatan u muuqda kuwa gabay hadalka.
Masuuliyiinta Jwxo-shiil, ee aadka loogu yaqaan Jwxo-shiilada oo badankoodu ku nool dalalka reer galbeedka, ayaan iyagu ka hadli karin Ideecadaha, oo ay ka muuqato niyad jab iyo is aaminaad la,aan.
Marka laga reebo Ina dhuubo oo isagu wax ku shukaansada aalada Internetka ee loo yaqaan Paltak, habeen hore dad 30 ruux ah kulahaa meel walba waanu ka dagaalanaan xitaa dhulka Oromada.
Dagaalo aanaan wali haynin warbixintooda ayaa galabtana ka dhacay Wardheer, meeshaas oo ahayd meeshii uu doonayey in uu ka baxo Jwxo-shiil, hadii ay u soorobi lahayd in uu gaadhigaas fuuli lahaa.
Waxaaynu isha ku hayn doonaa xaalada ka soo koradha Jwxo-shiil oo uu dagaal ku socdo, ayna u badan tahay in gacanta lagu dhigo ama la dilo xiligan.